Kedu ka esi ghọta ihe na-arịa ọrịa Begonia? - Mkpụrụ ubi - 2019
Kedu ka esi ghọta ihe na-arịa ọrịa Begonia?
Na oke ohia na ebe ndi ozo African, Asia, American Ndị nnọchiteanya nke ụdị Begonia, nke gụnyere ihe karịrị ụdị 900 na ihe dịka ụdị mkpụrụ ndụ 2000, na-eto n'ụba.
Nke a bụ osisi herbaceous, osisi na bushes, n'etiti ha ị nwere ike ịchọta magreen na akwukwo idobe. Na ọkara nke abụọ nke narị afọ gara aga, ha biri na Europe, ma na-ekele akwụkwọ osisi na okooko osisi, ha na ndị na-elekọta ubi dara.
Begonias anaghị emetụta pests na ọrịa, ma ọ bụrụ na ị hụ mgbanwe na-adịghị mma n'ọdịdị akwụkwọ ma ọ bụ okooko osisi, ị ghaghị ịchọpụta ihe kpatara ya ma gwọọ anụ ụlọ gị.
Ọrịa Beordia Leaf
Definition nke ọrịa dị ka ifuru
Mkpebi nke ọrịa infestation na ụdị ọrịa dịka akwụkwọ
Mkpebi nke ụdị pesti site na ụdị mmebi nke ifuru
Ọrịa Begonia na ọgwụgwọ ha, pests na njikwa ha
Gini mere Begonias ji gbagharia, gbanye gburugburu ya, akpo ma ọ bụ daa epupụta, ị nwere ike ịchọpụta n'okpuru:
A na-ekpuchi akwụkwọ ahụ na obere oghere na-egbukepụ egbukepụ, nke, nke nta nke nta na-agbasa, na-ekpuchi elu ala dum nke akwụkwọ agụ akwụkwọ na-acha ọcha akpụkpọ anụ, ka akwukwo ahụ na-agba ọchịchịrị na nkụ? Ị na-ahụ ihe mgbaàmà na-egbu egbu.
Ọgwụgwọ: 2 grams nke ọla kọpa sulphate, 20 grams nke ncha ncha kwa 1 liter mmiri ma ọ bụ ihe ọ bụla fungicide maka ụlọ ime ụlọ.
N'elu epupụta, elu nke osisi na okooko osisi na-acha ogho ọcha ma na-agba aja aja, nwayọọ nwayọọ na-agba ọchịchịrị, na-acha aja aja, na-afụ ụfụ, ebe ị ga-esi na-adaba ma na-agbaji, mgbe iru mmiri na-ebelata, ebe rere ure na-acha akwụkwọ ọkụ ma daa, A na-akpọ ọrịa a ka ọ bụrụ ire ere.
Ọgwụgwọ: 1% ngwọta nke Bordeaux ngwakọta, ihe ngwọta nke 2 grams nke ọla kọpa sulphate na 20 grams ncha kwa 1 liter mmiri, fungicides.
N'okpuru akwukwo a na-ekpuchi ya n'egwurugwu mmiri, dị ka mpempe akwụkwọ iko, na oge ha na-agba ọchịchịrị, ka akwukwo petioles gbara ọchịchịrị? Nke a na-ahụ ọnyà ọjọọ.
A naghị agwọ ọrịa ahụ, a na-ebibi ụdị ọrịa ahụ na-egbu egbu ma kpoo ite ndị ahụ.
Mgbochi: ọgwụgwọ na 0.5% nkwusioru nke ọla kọpa oxychloride, na ugboro ugboro spraying mgbe izu abụọ.
Ndi akwukwo ji nwayo kpuchie ya, ogho anwu, bu ogho akwukwo? Anyị na-ahụ ebe mgbanaka.
A na-ebibi osisi na-arịa ọrịa Ebe ọ bụ na ntụpọ mgbanaka ahụ na-agwọ ọrịa na ọdịdị, a na-echekwa virus ahụ nke ọma na mkpụrụ ndụ ma enweghị ike ịgwọ ya. Ndị na-ebu ọrịa pathogens bụ pests pests, n'ihi ya, ọ dị mkpa ikpochapụ ha n'oge ma rụọ usoro mgbochi kwesịrị ekwesị.
Ndi okooko osisi ndi kpuchiri ya na aja aja, ntanu ahihia? Nke a bụ ihe nrịba ama nke ntụ ntụ.
A na-ahụ onyinyo okooko osisi na ntụpọ mgbanaka.
Begonia emeela ka ọ daa mbà, ọ na-acha ọkụ, akwụkwọ ahụ na-egbuke egbuke na nsị, nwere ike inwe oge ntoju nke ụdị anụ ndị nke ero na-edozi? Osisi na-emetụta osisi ahụ.
Pelletizer na-agba chaa chaa - ụmụ ahụhụ ruo 5 mm., Transparent, kpuchie ya na wax-dịka, oge ntoju, ya na ụbụrụ ya na-edozi akụkụ nke akwukwo, veinlets ma na-eri nri na ihe ọṅụṅụ, nke gụnyere ike na ọnwụ.
na-esi ísì ụtọ nke galik, 10 grams nke garlic kwa 1 liter mmiri, na-agbatị na ụbọchị 12 ruo 14.
na-eji ihe ọ bụla na-egbu ihe na-emepụta ihe maka ime ụlọ dịka ntụziaka maka nkwadebe, ịmegharị ugboro ugboro dị mkpa.
Akwụkwọ ahụ na-agbanwe edo edo, ụyọkọ ahụhụ ụmụ ahụhụ na-apụta ìhè na ya, akụkụ ha ruru 2.5 millimeters, ụcha nke acha odo odo ma ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ bụ aphid na ụbụrụ ya. Ha na-eri nri na mmiri, na-eme ka ndị na-eme ka ike gwụ ha, ma nwee ike ịnagide ọrịa ndị dị ize ndụ.
Ụzọ iji chebe:
ihe ngwọta nke nchacha ákwà na ọnụego 20-30 grams kwa 1 liter mmiri.
shag infusion, 20 grams kwa 1 liter mmiri, oge infusion - 2 ụbọchị.
ọ bụla ụmụ ahụhụ, na uche gị.
A na-ahụ windo nke epupụta, a pụrụ ịchọta ụmụ ahụhụ ruo 1.5 mmụm n'elu akwụkwọ. nwere nku abụọ abụọ, kpuchie ya na-acha ọcha oge ntoju? Nke a bụ nku nku abụọ, ya na ogwu ya, dị ka aphids, na-eri nri na osisi ahụ, ha na-ebu ọrịa.
Na-agbanye ume mgbe nile na ngwọta nke nchacha ncha na ọnụọgụ nke gram 40 kwa 1 liter mmiri.
Begonia adighi n'azu n'azu, akwukwo achoputara, chigharia odo, umu anumanu na-acha uhie uhie nwere ike ichoputa na akwukwo, ruo 1.5 mm. nwere nku abụọ abụọ? Nke a bụ thrips.
na-esi na nchacha nke nchacha ncha na ọnụọgụ nke gram 40 kwa 1 liter mmiri.
spraying infusion ma ọ bụ decoction nke ụtaba, 100 grams kwa 1 liter mmiri.
Ejikọtara uto osisi na ọdịdị nke ihe na-adịghị mma, ọ bụ irighiri ihe ruru 1.2 mm n'ogologo, nke na-ebi na mgbọrọgwụ na akụkụ ala nke steam, na ụdị a na-ahụ maka ịtọ nsen. Na nematode na-ebute usoro mgbọrọgwụ na ọnwụ onye ọbịa ya.
A na-eme ka Begonias ṅụọ mmiri na heterophos na mgbọrọgwụ.
Okpokoro agbacha, gbagọrọ agbagọ, oghere ọkụ na-apụta na epupụta, ihe dị njọ na-emetụta ụdị ihe ahụ? Ihe kpatara ya bụ obere worm na akụkụ ya ruo 1 mm. - akwukwo nematode.
Nhazi osisi heterophos ngwọta.
Buds, okooko osisi na epupụta nke begonia dara - ihe nwere ike ịbụ osisi infestation site aphids
Okooko osisi nwere ọdịdị jọgburu onwe ya - ihe kpatara ya bụ yikarịrị bụ thrips.
Ugbo oru kwesiri ga-enyere anu ulo gi aka ka ha na-aru ike mgbe nile, ka ha nwee obi uto n'ile ha anya. Ha na-ekwu na ọ dịghị okooko osisi jọgburu onwe ya, a na-eleghara okooko osisi. Ọrịa ndị ọrịa nwere ike ịkwa ákwá karịa ihe na-amasị - ya mere ka begonias gị bụrụ ahụike mgbe niile!
Ọzọ, ị ga-ahụ foto nke ọrịa na pests nke begonias:
N'okpuru ebe a bụ ndepụta nke isiokwu ndị nwere ike ịmasị gị.
Ụzọ aghụghọ nile nke ilekọta Tuberous Begonia
Ịgba oyi nke begonia
Ihe niile gbasara Begonia - site na A ruo Z
Ogige na-emeri ihe ubi Begonias
Ogige Begonia Nlekọta
Dwarf petunia. Kedu ụdị ụdị okooko osisi ndị a na-akpọ na ihe ha bụ?
Mkpụrụ osisi Siberia buru ibu na-amị mkpụrụ nke ọma - New Koenigsberg - nkọwa na njirimara.
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Kedu ka esi ghọta ihe na-arịa ọrịa Begonia?